Iindlela ze-10 zokufumana iinqwelomoya eziphantsi - iiGeofumadas
Iindlela ze-10 zokufumana iinqwelo-moya ezincinci
Agasti, 2009 Internet kunye neBlogs, Uhambo
Okwangoku ndilungiselela uhambo lwam eCharlotte, ndifuna ukuthatha ithuba lokubonisa ubuncinci beenkonzo zeenqwelo moya ze10 kwi-Intanethi.
Into ephambili ekufuneka ijonge indiza kufuneka ibe ngumgca esiqhele ukuwusebenzisa, ukusebenzisa amathuba okubhabha iimayile rhoqo okanye amakhilomitha etyala. Kodwa oko akunakusizisela awona maxabiso akhululekileyo ngaphandle kokuba sisebenzise ithuba lokunikezelwa kwamaxesha athile ngeposi yethu. Kodwa ngala maxesha, ukuba eyona nto siyifunayo kukubaleka ngexabiso eliphantsi, eyona ndlela kukuhamba nabathengisi kwaye uthelekise amaxabiso; Sinokufumana izivumelwano ezingcono kunexabiso elifanayo kwiwebhusayithi esemthethweni yenqwelo moya kwaye sihlala sihamba iimayile.
Ngokubanzi, phantse nawuphi na umboneleli uneendawo zokuya naphi na emhlabeni, umahluko kukuba ukufumana iinqwelomoya ngexabiso eliphantsi kuya kuba kwindawo yabo yempembelelo enkulu kuba banezivumelwano ezikhethekileyo neearhente zokuhamba okanye iindiza.
Nazi iindlela ze-10:
Hayi. igama Kutheni uyikhetha?
1 IsiMexico Ilungele ukuhamba nokubuya eMexico, kunye neeofisi eziphambili kwizikhululo zeenqwelo moya eMadrid, eLondon, eCanada, eUnited States kwaye phantse kuyo yonke iLatin America.
2 Thatha uhambe Ilungele ukufumana iinqwelomoya phakathi koMzantsi Melika, eMexico naseMelika
3 Umzuzu wokugqibela Iinqwelomoya ezininzi kunye nokuya eYurophu naseMelika.
4 I-Destinia Ilungele iinqwelomoya ezivela eSpain, ngaphakathi nangaphandle ngeepakeji zehotele, imoto kunye nokunye.
5 Isiphelo sendlela A Ilungele iindiza phakathi kweArgentina, eSpain kunye nezinye iYurophu
6 Condor Ukubhabha ukusuka naphi na emhlabeni ukuya eJamani.
7 Ukutyelelwa esibhakabhakeni Iindiza phakathi kweUnited States neYurophu
8 IBravoly Iindiza eYurophu phantse nayo nayiphi na inqwelo moya
9 Expedia Iindiza, iipakheji zokuhamba, iihotele kunye nokunye. Phantse naphi na emhlabeni.
10 Iiphupha Iindiza eYurophu, zibandakanya ezinye iinkonzo kubakhenkethi
Omnye unokuzibuza ukuba benza njani aba baxhasi ukubonelela ngamaxabiso asezantsi kunakwiphepha elinye lomoya. Elula, bathengisa ivolumu eyenza kube lula ukuba badlale ngekhomishini abanayo nabaxhasi.
Okwangoku kube luncedo kakhulu kum ukucwangcisa uhambo lwam ukuya kuPhefumlelweNabathengisi abohlukeneyo bendihlala ndifumana elona xabiso lilungileyo kunye nenqwelomoya endikhethayo.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ukwahluke phakathi kwemifanekiso yeGoogle Earth Pro neGoogle Earth ekhululekile
Post Next I-Wpdesigner, i-WordPress iingcebisoOkulandelayo "
I-6 iphendula kwi "10 iindlela zokufumana iinqwelomoya"
Ndihlala ndikhangela Iinqwelomoya ekhaya Ndiyaya kwiiphupha zexabiso eliphantsi. Kwaye okunzulu, nokuba bangakanani na ukuba bathi hayi, iinjini zokukhangela zibonelela ngamaxabiso aphantsi kuneenkampani ngokwazo.
I-PidoPista: Injini yokukhangela indiza eyonwabisayo uthi:
Nabani na ojonga iinqwelomoya uya kubona ukuba iinjini zokukhangela zikunika indiza ebiza kakhulu, ngamanye amaxesha ngaphandle kwemeko kwaye ngaphandle kokujonga uhlahlelo lokubhabha, unxibelelwano ... kubonakala ngathi zonke iindiza ziyafana ngaphandle kwexabiso.
Ke, injini yokukhangela entsha, i-pidopista.com ikhangela iinqwelomoya ngaphandle kokunikezela ngexabiso. Ukunika iingcebiso zokuhamba ngenqwelomoya, ukuze ungathenga inqwelo moya naphi na apho ufuna khona (kwiarhente yakho, kwi-intanethi) usazi indlela indiza yakho eyahlukileyo ngayo kwezinye
Isifundo asiyi kuba yi-GIS / CAD, kodwa ngenxa yiya ku-Inspired, Kufuneka ndikhangele iinqwelomoya ezinqabileyo.
Ungayifumana njani kwakhona ukuya kwibhlog yakho? Uyenza njani ibhlog yakho ukuba ivele kukhangelo lukaGoogle?
Thetha malunga neenqwelo moya ezinqabileyo… kwaye ke ungeze imali kwimo yentengiso…
Ngaba oku akuhambanga kwi-GIS / CAD?
Ngeenqwelo moya ngaphakathi eYurophu, ukusuka kumava am eyona Magina ngaphandle kwamathandabuzo Skyscanner. Phantse ihlala ifumana awona maxabiso akhawulezileyo, kwaye inenzuzo enkulu yokubonelela ngamaxabiso enyanga yonke, ukuze kwitshathi yeetafile ungabona ukuba zeziphi iintsuku zenyanga ekuthi ngexabiso eliphantsi ukuba ubuye umva kwaye unokucwangcisa ukubaleka. Ndiyayicebisa.
ngeenqwelo eziphantsi uthi:
Ndiyifumana inqaku elinomdla kakhulu